21-11-2020 ओम् शान्ति प्रातः मुरली "बापदादा” मधुबन
"मीठे बच्चे– यो संगमयुग सर्वोत्तम बन्ने शुभ समय हो किनकि यसै समयमा बाबाले तिमीलाई नरबाट नारायण बन्ने पढाइ पढाउनु हुन्छ।”
तिमी बच्चाहरूसँग यस्तो कुनचाहिँ ज्ञान छ जसले गर्दा तिमी कुनै पनि हालतमा रुन सक्दैनौ?
तिमीसँग यो बनिबनाऊ ड्रामाको ज्ञान छ, तिमीलाई थाहा छ– यसमा हरेक आत्माको आ-आफ्नो पार्ट छ। बाबाले हामीलाई सुखको वर्सा दिइरहनु भएको छ, फेरि हामी रुन कसरी सक्छौं? पर्बाह थियो पार ब्रह्ममा रहनेवालाको, उहाँ मिल्नुभयो बाँकी के चाहियो? भाग्यवान बच्चाहरू कहिल्यै रुदैनन्।
ओम् शान्ति। रूहानी बाबा बसेर बच्चाहरूलाई एउटा कुरा सम्झाउनु हुन्छ। चित्रहरूमा यस्तो लेख्नु छ– त्रिमूर्ति शिवबाबाले बच्चाहरूप्रति सम्झाउनु हुन्छ। तिमीले पनि कसैलाई सम्झाउँछौ भने तिमी आत्माले भन्छौ– शिवबाबाले यसो भन्नुहुन्छ। यी बाबाले पनि भन्छन्– बाबाले तिमीलाई सम्झाउनु हुन्छ। यहाँ मनुष्यले मनुष्यलाई सम्झाउँदैनन् बरु परमात्माले आत्माहरूलाई सम्झाउनु हुन्छ वा आत्माले आत्मालाई सम्झाउँछन्। ज्ञान सागर त शिवबाबा नै हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ रूहानी बाबा। यस समयमा रूहानी बच्चाहरूलाई रूहानी बाबाबाट वर्सा मिल्छ। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड्नुपर्छ। यस समयमा तिमी देही-अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर्नु छ। कर्म पनि ठिकै छ गर, धन्दा आदि चलाइराख, बाँकी जति समय मिल्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ– शिवबाबा यिनमा आउनु भएको छ। उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, चैतन्य हुनुहुन्छ। सत्, चित्त, आनन्द स्वरूप भन्छन्। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर अथवा कोही पनि मनुष्य मात्रको यो महिमा होइन। उच्च भन्दा उच्च भगवान एउटै हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ सुप्रिम सोल। यो ज्ञान पनि तिमीलाई केवल यस समयमा छ। फेरि कहिल्यै मिल्दैन। हर ५ हजार वर्षपछि बाबा आउनु हुन्छ, तिमीलाई आत्म-अभिमानी बनाएर बाबालाई याद गराउन, जसबाट तिमी तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बन्छौ, अरू कुनै उपाय छैन। हुन त पुकार्छन् पनि मनुष्यले– हे पतित-पावन आउनुहोस् तर अर्थ बुझ्दैनन्। पतित-पावन सीताराम भने पनि ठीकै छ। तिमी सबै सीताहरू अथवा भक्तिनीहरू हौ। उहाँ हुनुहुन्छ एक राम भगवान, तिमी भक्तहरूलाई फल मिल्नुपर्छ भगवानद्वारा। मुक्ति वा जीवनमुक्ति, यो हो फल। मुक्ति जीवनमुक्ति दाता उहाँ एउटै बाबा हुनुहुन्छ। ड्रामामा उच्च भन्दा उच्च पार्टधारी पनि हुन्छन् भने निच पार्टधारी पनि हुन्छन्। यो बेहदको ड्रामा हो, यसलाई अरू कसैले बुझ्न सक्दैन। तिमी यस समयमा तमोप्रधान कनिष्टबाट सतोप्रधान पुरुषोत्तम बनिरहेका छौ। सतोप्रधानलाई नै सर्वोत्तम भनिन्छ। अहिले तिमी सर्वोत्तम छैनौ। बाबाले तिमीलाई सर्वोत्तम बनाउनु हुन्छ। यो ड्रामाको चक्र कसरी घुमिरहन्छ, यसलाई कसैले पनि जानेका छैनन्। कलियुग, संगमयुग फेरि हुन्छ सत्ययुग। पुरानोलाई नयाँ कसले बनाउँछ? बाबा सिवाय कसैले बनाउन सक्दैन। बाबाले नै संगममा आएर पढाउनु हुन्छ। बाबा न सत्ययुगमा आउनु हुन्छ, न कलियुगमा आउनु हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– मेरो पार्ट नै संगममा छ त्यसैले संगमयुगलाई कल्याणकारी युग भनिन्छ। यो हो पावन, धेरै उच्च शुभ समय संगमयुग, बाबा आएर तिमी बच्चाहरूलाई नरबाट नारायण बनाउनु हुन्छ। मनुष्य त मनुष्य नै हुन् तर दैवी गुणधारी बन्छन्, त्यसलाई आदि सनातन देवी-देवता धर्म भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– मैले यो धर्म स्थापना गर्छु, यसको लागि पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। पतित-पावन एउटै बाबा हुनुहुन्छ। बाँकी सबै हुन् प्रियतमा, भक्तिनीहरू। पतित-पावन सीताराम भन्नु पनि ठीक छ। तर अन्त्यमा जुन रघुपति राघव राजा राम भनिदिन्छन् त्यो गलत हुन जान्छ। मनुष्यले विना अर्थ जे आउँछ त्यो बोलिरहन्छन्, धुन लगाइरहन्छन्। तिमीलाई थाहा छ– चन्द्रवंशी धर्म पनि अहिले स्थापना भइरहेको छ। बाबा आएर ब्राह्मण कुल स्थापना गर्नुहुन्छ, यसलाई डिनायस्टी भनिदैन। यो परिवार हो, यहाँ न तिमी पाण्डवहरूको, न कौरवहरूको राजाईं छ। गीता जसले पढेका छन्, उनीहरूलाई यी कुरा छिटै समझमा आउँछ। यो पनि हो गीता। कसले सुनाउँछ? भगवानले। तिमी बच्चाहरूले पहिला पहिला त यो ज्ञान दिनु छ– गीताका भगवान को हुनुहुन्छ? उनीहरूले भन्छन्, कृष्ण भगवानुवाच। अब कृष्ण त हुन्छन् सत्ययुगमा। उनमा जो आत्मा छ त्यो त अविनाशी छ। शरीरको मात्रै नाम बदलिन्छ। आत्माको कहिल्यै नाम बदलिँदैन। श्रीकृष्णको आत्माको शरीर सत्ययुगमा नै हुन्छ। नम्बरवनमा उनी नै जान्छन्। लक्ष्मी-नारायण नम्बरवन फेरि हुन्छ सेकेन्ड, थर्ड। त्यसैले उनीहरूको अंक पनि त्यति नै कम हुन्छ। यो माला बन्छ नि। बाबाले सम्झाउनु भएको छ– रुण्ड माला पनि हुन्छ र रुद्र माला पनि हुन्छ। विष्णुको गलामा रुण्ड माला देखाउँछन्। तिमी बच्चाहरू विष्णपुरीको मालिक बन्छौ, नम्बरवार। त्यसैले तिमी विष्णुको गलाका हार जस्तै बन्छौ। पहिला पहिला शिवको गलाको हार बन्छौ, त्यसलाई रुद्र माला भनिन्छ, जसलाई जप्छन्। माला पुजिँदैन, जपिन्छ। मालाका दाना उनीहरू नै बन्छन् जो विष्णुपुरीको राजधानीमा नम्बरवार आउँछन्। मालामा सबैभन्दा पहिला हुन्छ फूल फेरि युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग हो नि। प्रवृत्ति मार्ग सुरु हुन्छ ब्रह्मा, सरस्वती र बच्चाहरूद्वारा। यिनीहरू नै फेरि देवता बन्छन्। लक्ष्मी-नारायण हुन् फस्ट। माथि हुनुहुन्छ फूल शिवबाबा। माला जप्दै गएर अन्त्यमा फूललाई ढोग्छन्। शिवबाबा फूल हुनुहुन्छ, जो पुनर्जन्ममा आउनुहुन्न, यिनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। उहाँले नै तिमीलाई सम्झाउनु हुन्छ। यिनको त आफ्नो आत्मा छ। उसले आफ्नो शरीर निर्वाह गर्छ, उहाँको काम हो केवल ज्ञान दिनु। जसरी कसैको स्त्री वा पति आदि मर्यो भने उसको आत्मालाई ब्राह्मणको तनमा बोलाउँछन्। पहिला आउँथ्यो, तर उसले कुनै शरीर छोडेर त आउँदैन। यो ड्रामामा पहिलादेखि नै निश्चित छ। यो सबै हो भक्ति मार्ग। त्यो आत्मा त गयो, गएर अर्को शरीर लियो। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले यो सारा ज्ञान मिलिरहेको छ, त्यसैले कोही मर्यो भने पनि तिमीलाई कुनै चिन्ता छैन। आमा मरे पनि हलुआ खाऊ (शान्ता बहिनीको उदाहरण)। बच्चीले गएर उनीहरूलाई सम्झाइन्– तपाईंहरू किन रुनुहुन्छ। उहाँले त गएर अर्को शरीर लिनु भयो। रोएर कहाँ फर्किएर आउनु हुन्छ र। भाग्यवान् कहाँ रुन्छन् र। उनले सबैको रुवाइलाई बन्द गराएर सम्झाउन थालिन्। यस्ता धेरै बच्चीहरू छन्, गएर सम्झाउँछन्। अब रुन बन्द गर्नुहोस्। झुटा ब्राह्मणहरूलाई पनि नखुवाउनुहोस्। म सच्चा ब्राह्मणहरू लिएर आउँछु। फेरि ज्ञान सुन्न थाल्छन्। सम्झन्छन्– यो कुरा त ठीक भन्छन्। ज्ञान सुन्दा-सुन्दै शान्त हुन थाल्छन्। ७ दिनको लागि कुनै भागवत आदि सुनाउने कार्यक्रम राख्छन् र पनि मनुष्यको दु:ख दूर हुँदैन। यी बच्चीहरूले त सबैको दु:ख दूर गरिदिन्छन्। तिमीले सम्झन्छौ– रुने कुनै आवश्यकता छैन। यो त बनिबनाउ ड्रामा हो। हरेकलाई आफ्नो पार्ट खेल्नु छ। कुनै पनि हालतमा रुनु हुँदैन। बेहदको बाबा, शिक्षक, गुरु मिल्नु भएको छ, जसको लागि तिमीले यति धक्का खाइरहन्छौ। पार ब्रह्ममा रहने परमपिता परमात्मा मिल्नुभयो अब बाँकी के चाहियो? बाबाले दिनुहुन्छ नै सुखको वर्सा। तिमीले बाबालाई भुल्छौ त्यसैले रुनु पर्छ। बाबालाई याद गर्यौ भने खुसी हुन्छ। ओहो! म त विश्वको मालिक बन्छु। फेरि २१ पीढी कहिल्यै रुने छैनौ। २१ पीढी अर्थात् पूरा बूढो हुँदासम्म अकालमा मृत्यु हुँदैन, त्यसैले भित्र कति गुप्त खुसी हुनु पर्छ।
तिमीलाई थाहा छ– हामीले मायालाई जितेर जगत् जित बन्छौं। हतियार आदिको कुनै कुरा होइन। तिमी हौ शिव शक्तिहरू। तिमीसँग छ ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उनीहरूले फेरि भक्ति मार्गमा देवीहरूलाई स्थूल बाण, खड्ग आदि दिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ– ज्ञान तरबारद्वारा विकारलाई जित्नु छ, बाँकी देवीहरू कुनै हिंसक कहाँ हुन् र। यो सबै हो भक्ति मार्ग। साधु-सन्त आदि हुन् निवृत्ति मार्गका, उनीहरूले प्रवृत्ति मार्गलाई मान्दैनन्। तिमीले त संन्यास गर्छौ सारा पुरानो दुनियाँको, पुरानो शरीरको। बाबालाई याद गर्यौ भने आत्मा पवित्र हुँदै जान्छ। ज्ञानको संस्कार लिएर जान्छौ। त्यसै अनुसार नयाँ दुनियाँमा जन्म लिन्छौ। यदि यहाँ जन्म लिए भने पनि कुनै राम्रो घरमा राजाको पासमा वा धार्मिक घरमा त्यो संस्कार लिएर जान्छन्। सबैलाई प्यारो लाग्छ। भन्छन्– यी त देवी हुन्। कृष्णको कति महिमा गाउँछन्। बाल्य अवस्थामा देखाउँछन्– मक्खन चोरे, मट्का फोरे, यो गरे.... कति कलंक लगाएका छन्। ठिक छ, फेरि कृष्णलाई कालो किन बनाएका हुन्? त्यहाँ त कृष्ण गोरो हुन्छन् नि। फेरि शरीर बद्लिइरहन्छ, नाम पनि बद्लिइरहन्छ। श्रीकृष्ण त सत्ययुगका पहिलो राजकुमार थिए, उनलाई किन कालो बनाएका हुन्? कहिल्यै कसैले बताउन सक्दैन। त्यहाँ सर्प आदि हुँदैनन् जसले कालो बनाइदेओस्। यहाँ विष चढेपछि कालो हुन्छन्। त्यहाँ त यस्ता कुरा हुँदैनन्। तिमी अहिले दैवी सम्प्रदायका बन्छौ। यस ब्राह्मण सम्प्रदायको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। सबैभन्दा पहिला बाबाले ब्रह्माद्वारा ब्राह्मणहरूलाई एडप्ट गर्नुहुन्छ। प्रजापिता हुन् त्यसैले उनका प्रजा पनि धेरै छन्। ब्रह्माकी छोरी सरस्वती भन्छन्। स्त्री होइनन्। यो कसैलाई पनि थाहा छैन। प्रजापिता ब्रह्माका त हुन्छन् नै मुख वंशावली। स्त्रीको कुरा होइन। यिनमा बाबा प्रवेश गरेर भन्नुहुन्छ– तिमी मेरो बच्चा हौ। मैले यिनको नाम ब्रह्मा राखेको छु, जति पनि बच्चा बन्छन् सबैको नाम परिवर्तन गर्नुभयो। तिमी बच्चाहरूले अहिले मायामाथि विजय पाउँछौ, यसलाई भनिन्छ– हार र जितको खेल। बाबाले कति सस्तो सौदा गराउनु हुन्छ फेरि पनि मायाले हराइदियो भने भाग्छन्। ५ विकाररूपी मायाले हराउँछ। जसमा ५ विकार छन्, उनीहरूलाई नै आसुरी सम्प्रदायका भनिन्छ। मन्दिरमा देवीहरूको अगाडि पनि गएर महिमा गाउँछन्– हजुर सर्वगुण सम्पन्न...... बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनु हुन्छ– तिमी नै पूज्य देवता थियौ फेरि ६३ जन्म पुजारी बन्यौ, अब फेरि पूज्य बन्छौ। बाबाले पूज्य बनाउनु हुन्छ। रावणले पुजारी बनाउँछ। यी कुरा कुनै शास्त्रमा छैनन्। बाबाले कहाँ शास्त्र पढ्नु भएको छ र। उहाँ त हुनुहुन्छ नै ज्ञानको सागर। वर्ल्ड अलमाइटी अथोरिटी। अलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान। बाबा भन्नुहुन्छ– सबै वेद–शास्त्र आदिलाई जान्दछु। यी सबै हुन् भक्तिमार्गका सामग्री। म यी सबै कुरालाई जान्दछु। द्वापरदेखि नै तिमी पुजारी बन्छौ। सत्ययुग-त्रेतामा त पूजा हुँदैन। त्यो हो पूज्य घराना। फेरि हुन्छ पुजारी घराना। यस समयमा सबै पुजारी छन्। यी कुरा कसैलाई थाहा छैन। बाबा नै आएर ८४ जन्मको कहानी बताउनु हुन्छ। पूज्य पुजारी– यो सारा खेल तिमी माथि नै हुन्छ। हिन्दु धर्म भनिदिन्छन्। वास्तवमा त यहाँ आदि सनातन देवी-देवता धर्म थियो, नकि हिन्दु। कति कुरा सम्झाउनु पर्छ। यो पढाइ हो नै सेकेन्डको। फेरि पनि कति समय लाग्छ। भन्छन्– सागरलाई मसी बनायौ, सारा जंगललाई कलम बनायौ भने पनि पूरा हुन सक्दैन। अन्त्यसम्म तिमीलाई ज्ञान सुनाइरहन्छु। तिमीले यसको किताब कति बनाउँछौ? सुरुमा पनि बाबाले सबेरै-सबेरै लेख्नुहुन्थ्यो, फेरि मम्माले सुनाउँथिन्, त्यस समयदेखि छापिदै आयो। कति कागज सकियो होला। गीता त एउटै यति सानो छ। गीताको लकेट पनि बनाउँछन्। गीताको धेरै प्रभाव छ, तर गीता ज्ञान दातालाई भुलेका छन्। अच्छा!
१) ज्ञान तरबारद्वारा विकारलाई जित्नु छ। ज्ञानको संस्कार भर्नु छ। पुरानो दुनियाँ र पुरानो शरीरको संन्यास गर्नु छ।
२) भाग्यवान् बन्ने खुसीमा रहनु छ, कुनै पनि कुराको चिन्ता गर्नु छैन। कसैले शरीर छोड्यो भने पनि दु:खको आँसु बगाउनु हुँदैन।
ताज र तख्तलाई सदा कायम राख्ने निरन्तर स्वत: योगी भव
वर्तमान समयमा बाबाद्वारा सबै बच्चाहरूलाई ताज र तख्त मिलेको छ, अहिलेको यो ताज वा तख्तले अनेक जन्मको लागि ताज, तख्त प्राप्त गराउँछ। विश्व कल्याणको जिम्मेवारीको ताज र बापदादाको दिलतख्त सदा कायम रहेमा निरन्तर स्वत: योगी बन्छौ। उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको मेहनत गर्नु पर्दैन किनकि एक त सम्बन्ध नजिकको छ दोस्रो प्राप्ति अखुट छ। जहाँ प्राप्ति हुन्छ त्यहाँ स्वत: याद हुन्छ।
प्लेन बुद्धिद्वारा प्लानलाई व्यवहारमा ल्यायौ भने सफलता अवश्य मिल्छ।